GPS Babel, sida ugu fiican ee loo adeegsado macluumaadka - Gofumed
Maarso, 2010 Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, topografia
Xidhiidhada ugu wanaagsan ee aan helay Sida jawaab-celin Gabriel, oo ka yimid Argentina ayaa noo sheegay dhowr maalmood ka hor. Waxay ku saabsan tahay GPS Babel, Adeegsi GPL ah oo bilaash ah oo adeegsanaya Windows, Linux iyo Mac.
Hagaajinta xogta hal qalab iyo si toos ah u dir. Tusaale ahaan, waxaad ka soo qaadan kartaa Garmin adoo adeegsanaya USB una diraya Magellan iyada oo loo marayo deked kale. Isla la mid ayaa lagu sameyn karaa faylasha sida akhrinta SD ee Magellan oo si toos ah u diraya kml, csv, OSM, iwm.
Akhri / ama qor, shuruudaha qaabka 160, oo aan halkan ku tusayo 50 ugu fiican.
Foomka waypoints tracks wadooyinka
Lee Qor Lee Qor Lee Qor
Faylasha xogta CompeGPS (.wpt / .trk / .rte) si si si si si si
DeLorme PN-20 / PN-30 / 40 PN-USB maamuuska si si si si si si
Garmin MapSource - Baarlamaanka si si si si si si
Garmin MapSource - txt (tab, xuduuddiisa leh) si si si si si si
Garmin serial / maamuuska USB si si si si si si
file Geogrid-Daawade ASCII dahaadhaa (.ovl) si si si si si si
Google Earth (Keyhole) Luuqad Dhibco ah si si si si si si
Qoraalka KuDaTa PsiTrex si si si si si si
Hoosudhaca USR si si si si si si
Magellan Mapend si si si si si si
Faylasha Magellan SD (sida eXplorist) si si si si si si
Faylasha Magellan SD (sida Meridian) si si si si si si
Nidaamka xajinta magellan si si si si si si
Meelaha-Khariidadaha Faylasha Miisaaniyadda (.mmo) si si si si si si
PathAway Database ee Palm / OS si si si si si si
Skymap / KMD150 faylasha ascii si si si si si si
Maamulaha Suunto Trek (STM) Faylasha WaypointPlus si si si si si si
Csv Universal oo leh qaab dhismeed
Iyo safka hore si si si si si si
kuwan raadkaygay Vito Navigator II si si si si si si
Faylka 'DeLorme .an1 (sawirka) si si si si si
Humminbird jidadka iyo wadooyinka (.hwr) si si si si si
Faylasha xogta OpenStreetMap si si si si si
waypoints Alan Map500 iyo wadooyinka (.wpr) si si si si
Arkaan waypoint file binary (.ert) si si si si
FAI / IGC Format Data Recorder si si si si
0183 NMEA weedho si si si si
Maareeyaha aaannu Suunto (stm) .sdf files si si si si
tracklogs khariidaynta digital (.trl) si si si si
XAiOX iTrackU Logger Binary File si si si si
Faylka xogta kaydka ee CarteSurTable si si si
cotoGPS ee Palm / OS si si si
Faransiiska GPSGate Simulation si si si
G7ToWaan faylasha xogta (.g7t) si si si
Xarunta Tababarka Garmin (.tcx) si si si
Xalka weyn intaasi dheer oo ay leeyihiin filtarrada iyo saaro nuqul, beddeli hanuun wadada, fududeeyo dhibcood, reorder liisaska iyo xitaa uu leeyahay qayb ka mid ah ay ka shaqeynayaan in ay ordi online si aad u aragto Khariidadaha Google ama u samee sheekooyin. Waxaan idiin digayaa in Gpsvisualizer.com waxaa jira waxyaabo badan oo dheeraad ah si ay u arkaan, bogga weyn oo khayraadka la taaban karo.
Waxaa ugu fiican oo dhan, waa bilaash inaad isticmaasho. Halkan waxa aad kala soo bixi kartaa GPS Babel.
Post Previous«Previous Maaddaama khariidadaha aan gunta ahayn
Post Next kiiska warqad Change la Microsoft Word iyo ka badanNext »
6 Jawaab in "GPS Babel, ugu fiican ee ku shaqeeya xogta"
Paola isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo ... Waad ku mahadsan tahay xariirkaan, laakiin waxaan haystaa dhibaato, waxaan ka gudbiyaa xogta ka imanaysa qalabka isboortiga ee aan ku leeyahay farsamaynta csv, laakiin ma aanan ku guulaysan in sidaas la sameeyo. Waxaan jeclaan lahaa inaad fadlan iga caawiso sidan ...
SOCRATES IBARRA isagu wuxuu leeyahay:
By habka, waxaan halmaamay in aan kuu sheegi loogu badalo in Helidda iyo SOFTWARE LAAKIIN MACLUUMAADKA NO TEMPERATURE YAR AMA qoto dheer ama wax kale. WAAD KU MAHADSAN
SIDEE AYAAN qaataan kartaa faylasha MY IYO ROUTE WAYPOINTS HUMMINBIRD A si .TXT * ah, AS BAAHIDA isticmaalaan xogta in on map a. SOFTWARE IYO Hoose laakiin ma talinaynaa in ogolow soo jeestay AAN FAAHFAAHINTA .HWR O HL A .TXT. Mahad BADAN qadarinaynaa caawintiina. Socrates
Hi Gabriel, waad ku mahadsan tahay link.
Emilio: Waad ku mahadsantahay macluumaadka, wax badan igama aanan qaadin nooca console-ka, waxay umuuqataa in shaashadaha madoow ay naga dareensiinayaan inay tahay DOS, laakiin waxaan arkaa inay wax badan jiraan oo ay ku socdaan xawaare la yaab leh.
Inkastoo aysan ka muuqan miiskii aad dhigtay, GPSBabel ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad beddesho shaatifoyinka mid ka mid ah habka kale ee faylka GPS ah. Haa, waa inaad u sameysaa iyada oo loo marayo qunsulku sababtoo ah cimilada garaafka weli ma taageeri karo.
Thanks for comments aad oo wax baan arkayaa in aan wax faa'iido leh, waxaan idinku leeyahay u isticmaalaa in dhalin files GPX ka Etrex jir ah iyo isagii ka qaaday in GlobalMapper oo wuxuu dhigay laba qaabab mid SHAPEFILE in la furo in ArcGIS iyo KML si loogu isticmaalo GOOGLE dunida , labada GPSBABEL iyo GPSVISUALISER labaduba waxtar ayey u leeyihiin waxyaalahan.
Salaan ka soo Argentina